Home Wararka Mustaf Cagjar oo cabsi la soo daristay, qabtayna banaanbax looga soo horjeedo...
Mustaf Cagjar oo cabsi la soo daristay, qabtayna banaanbax looga soo horjeedo TPLF
Magaalooyinka Jigjiga & Addis Ababa waxaa ka socda dibadbax lagu dhiiragelinayo Ciidanka Federaalka ee la dagaalamaya Xoogagga TPLF kaddib markii Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed uu dalbaday in shacabka uu ka dibadbaxo xaaladda Itoobiya.
Jigjiga oo ah xarunta Dowlad-Deegaanka Soomaaliya waxa uu maamulka Mustafa Cagjar abaabulay isu soo bax lagu taageerayo Ciidanka Federaalka, shacabka ayaa loo daabacay boorar lagu qoray ereyo ka dhan ah TPLF.
Magaalada Addis Ababa oo ah meesha ay indhaha ku hayaan xoogagga kasoo duullaan tagay Ismaamulka dhaca Waqooyiga Itoobiya ayaa lagu qabtay bannaanbax shacab kooban ay ka qaybgaleen.
“Waxa aan taageersanahay howlgalka ciidanka qaranka uu ka wado Waqooyiga Dalka” ayaa lagu xardhay boorarka loo daabacay dibadbaxayaasha waxaana labada dhinac lagu dhajiyay Calanka Itoobiya & Sumadda Dowlad-Deegaanka Soomaalida.
Magaalada Addis Ababa ka sokoow Culeyska Ciidanka Mucaaradka uu saaray waxaa ka socda qulqulka ajaanibta oo waddamadooda ku wargeliyeen in ay isaga baxaan Caasimadda Itoobiya oo laga cabsi qabo in ay gasho fowdo & qalalaase.